Kitapo mangatsiaka vita amin'ny insulated sinoa 32-fanamboarana sy orinasa | Kinghow
Ny famolavolana fisokafana malalaka dia mahatonga azy hiteny hoe haka zavatra, na dia mametraka zavatra marobe aza ianao dia afaka mahita izay ilainao indray mipi-maso. Azo entina an-tsoroka mba hanafaka ny tananao. Natao tamina pad matevina hampihenana ny tsindry amin'ny soroka.
Endri-javatra Tote Bag kokoa
FAHASALAMANA LEHIBE: ny kitapo mangatsiaka kokoa dia mahazaka hatramin'ny 23 litatra (litatra 6) isam-bolana. Afaka maka kapoaka 32 amin'ny zava-pisotro tianao indrindra miampy ranomandry ianao. Ireo fizarana roa voakilaka dia mamela ny fonosana ranoka misaraka amin'ny sakafo maina. Ny refy ankapobeny dia manodidina ny 14.9 x 8.6 x 11 inch / 38 x 22 x 28 cm (L x W x H). Izy io dia mety indrindra amin'ny fitsangantsanganana ataon'ny fianakavianao manontolo na manangona sakafo maivana ho an'ny fanatanjahan-tena ho an'ny tanora eny an-kalamanjana, amoron-dranomasina, fitobiana, fitsangantsanganana, tailgates, lalao baolina kitra sns.
FITORIANA LEAKPROOF: Ny ivelany ny kitapo mangatsiatsiaka kokoa dia vita avy amin'ny lamba oxford matevina, tsy mahazaka rano, tsy misy loto izay mahatonga azy io ho mateza, tsy tantera-drano ary mora diovina. Nohavaozina avy amin'ny fananganana zaitra nentim-paharazana, ny faritra ambany dia mampiasa teknolojia mafana manindry mba hampifandray tsara ny voasarimakirana manome leakproofness tena tsara.
INDRINDRA NY FARITRA LOHATRA: Ny faritra ambony dia mampiasa lamba oxford 210D sy foam EPE hitehirizana entana maina, ary ny faritra ambany kosa dia mampiasa fitaovana insulation avo lenta sy valizy voaporitra ao anaty kitapo hiasa mba hahazoana antoka fa mitazona ny sakafo mangatsiaka sy vaovao ho an'ny 12 ora. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny serivisy fanaterana sakafo ary vahaolana tsara hitondrana sakafo any amin'ny magazay fivarotana.
POCKET MULTIPLE: miaraka amina paosy ambony ambony 1, paosy sisiny 2, ary paosy 2 eo anoloana, ireo paosy marobe dia afaka mamaly ny filan'ny fitahirizana entana samihafa. Azo ampiasaina amin'ny kitapo duffel anao manokana izy io. Natao tamin'ny fehin-kibo sy kofehin-tsoroka azo esorina izay manolotra fomba fitondrana 3. Afaka misafidy ny hitondra tanana ianao na mitondra fehin-tsoroka. Azonao atao koa ny mametraka ity kitapo ity amin'ny valizinao ho an'ny dia lavitra.
Fampiasana VERSATILE: Ity kitapo mangatsiatsiaka kokoa ity dia azo fenoina sakafo atoandro sy fonosana ranomandry vitsivitsy ho an'ny lasy, ary azo apetraka ao amin'ny vatan'ny SUV-nao koa izany. Rehefa manao dia an-tongotra amin'ny fiaramanidina ianao dia afaka aforeto amin'ny fisaka ilay izy ary fonosiny ao anaty valizinao.
tote mangatsiaka kokoa
kitapo fisakafoanana antoandro
Kitapo mangatsiaka malefaka 20 cananà lehibe
Mpitaona Tote Bag azo tsaboina
Kitapo mangatsiaka kokoa - fitahirizana zava-pisotro sy fisotro ho an'ny Gol ...